Banyere Anyị - Wenzhou Weihang Plastic Co. Ltd
Naịlọn cable tie
Igwe anaghị agba nchara mkpọchi Steel Ball Ties
Wiring Ngwa Series
Wenzhou Weihang Plastic Co., Ltd. bụ ọkachamara aku na naịlọn belt, igwe anaghị agba nchara tie, tie efere tie, bead ụdị, nọmba tube, ọjà, film, fastener, ntu mkpachị, sọrọ ike mgba ọkụ, sọrọ ike akpaka nyefe mgba ọkụ ngwaahịa R & D, mmepụta na ahịa na otu n'ime ụlọ ọrụ. Na iji guzobe a ogologo oge mụ ekwenye mmekọahụ a ọnụ ọgụgụ nke Jeriko na mmadụ. The ụlọ ọrụ nwere nnukwu ọgwụ na ịkpụzi igwe, nkwakọ ígwè, elu mmepụta technology, ule ngwá, ike oru ike, na ngwaahịa na-exported na Europe, na United States, na Middle East na mba ndị ọzọ na mpaghara.
The ụlọ ọrụ specializes na mmepụta nke naịlọn teepu ọrụ okpomọkụ: -20 degrees Celsius ka +80 DEG C (naịlọn 66). Na-aga n'ihu mma nke ihe onwunwe ga-enwe ike ime naịlọn eriri ala okpomọkụ -40. Na acid, alkali, ire ọkụ retardant, anwụ ngwa ngwa, mkpuchi na ndị ọzọ uru. Ngwaahịa na n'ọtụtụ ebe, na-eji na esịtidem electronic factory, bundling TV, na kọmputa USB, ọkụ, cable tie akara, nwekwara ike-eji maka n'ime ime mma, n'ogige nkịtị, ụgbọ mmiri cable esịtidem fixation, ịnyịnya ígwè ma ọ bụ ụgbọala mbukota bundling ihe ndị ọzọ nwekwara ike-eji maka ugbo, hotikoisho, handicrafts na ndị ọzọ na bundled ihe. The ngwaahịa nwere àgwà nke ngwa ngwa na-adịgide adịgide, ezi mkpuchi, onwe kpochidoro, mfe iji na na. Bụrụnụ ndị na-a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụlọ ọrụ, ulo oru aka na-azụta yiri ngwaahịa nke oke, ma a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke Ahịa ịbanye United States na ndị ọzọ na mba ndị mepere emepe.
Companies n'ịgbaso ndị "na ụwa, na ahịa mmeri-mmeri" azụmahịa na nkà ihe ọmụma, mgbe nile rube isi na "uru nke ụlọ ọrụ nke ezi mma, elu arụmọrụ na ala na-eri" ndị ahịa na-eche ụwa, na ike mụbaa anụ ụlọ na mba ahịa, eguzobewo a sales netwọk na ahịa ọrụ ọrụ usoro na mba, obodo, na ngwaahịa na-exported ka Southeast Asia, Europe na United States na obodo ndị ọzọ na mpaghara, òkè na ahịa ibu ọnụego wee na-ebili nwayọọ nwayọọ, obi ụtọ na-anabata ndị ọhụrụ na ndị agadi ahịa n'ụlọ na mba ọzọ bịa ileta na kpakorita azụmahịa, ike a mma n'ọdịnihu!
Adress: Yueqing City, Liushi AO AO Industrial Mpaghara